« Pask’Ampefy 2019 »: iarahana amin-dry Team Safelika… | NewsMada
« Pask’Ampefy 2019 »: iarahana amin-dry Team Safelika…
Hiverina indray ny « Pask’Ampefy » ! Fotoana ifanomezana rehefa fetin’ny Paska izy ity taloha. Nangingina nandritra ny taona maro kanefa fantatra indray izao fa raisin’ny Media Consulting an-tanana ny fikarakarana azy. Hotontosaina ny 20 hatramin’ny 22 avrily izao ny hetsika ao Ampefy ary hanasana ireo mponina amin’ny kaominina manodidina sy ireo mpiala voly hisafidy ny toerana.
Hahazo laka ny hetsika zavakanto amin’ity andiany voalohany ity, izay hanomboka amin’ny adin-kiragasy gaovana, hifanandrinan-Razafindramanga Berthine Ambohimanjaka sy ry Raveloson Jean Bà, avy ao Arivonimamo, eo amin’ny kianja fanaovam-baolina. Hitohy amin’ny “cabaret” ao amin’ny Relais de la Vierge ny alin’ny asabotsy 20 avrily. Hanafana ny fotoana amin’izany ry Luk, Inah ary Mahery.
Eo amin’ny kianja lehibe no manome fotoana ireo mpankafy azy ny Team Safelika ny alahady. Hodimbiasin-dry Taa Tense sy Odiay kosa izy ireo, amin’ny seho goavana ny alatsinain’ny Paska.
Hiara-dalana amin’izany koa ny fanatanjahantena, toy ny fifaninanana tsipy kanetibe sy hazakazaka am-bisikileta. Eo koa ireo tranoheva hampirantiana sy hivarotana ny vokatry ny tany, mandritra ireo telo andro ireo.